कोरोना भाइरसवाट बच्नको लागि भारतमा यस्ताे अन्धविश्वास !
एजेन्सी । भारतमा महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि गौमुत्र पिउने गरेका छन् । त्यतिमात्र नभई देखि लिएर पुजापाठ गर्ने सम्मका कामहरु भइरहेका छन् । बिरामीहरूको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मन्दिरमा सोमबार एउटा प्रमुख निर्णय लिइएको थियो । यहाँ बाबा महाकालको हरेक बिहान ४ बजे हुने भष्माराटीमा प्रवेश ३१ […]
बिवाह गर्नको लागि यसरी लाइनमा बस्न बाध्य युवती !
एजेन्सी, युवाहरुको कमि भएपछी युवतीहरु विवाहित पुरुषको कान्छी, माईली, साईली दुलहीसम्म बन्न तयार रहेका छन् । सिरियामा गृह युद्दको कारण पुरुषको संख्यामा कमि आएको छ । लाखौँ युवाहरु ज्यान जोगाउन देश छोडी सकेका कारण पनि सिरियामा युवाहरुको अनिकाल परेको हो । युवाको कमि परेपछि युवतीहरु विवाहित पुरुषको साईली, माईली, कान्छी दुलही बन्न तयार रहेका छन् […]
१०३ वर्षका वृद्धाले २७ वर्षकी युवतीसँग विवाह !
एजेन्सी, १०३ वर्षका वृद्धाले आफूभन्दा करिब ७६ वर्ष कान्छी महिलासँग विवाह गरेसँगै चर्चामा आएका छन् । इन्डोनेशियाका पुआंग कट्टेले २७ वर्षकी इन्डो अलंगसँग विवाह गरेका छन् । यो विवाह वास्तविक भएको इन्डोनेशियाका समाचार एजेन्सीले यसबारे पुष्टि गरेको छ ।
जेरदान नाम गरेको डरलाग्दो बिरालो, जसलाई इन्स्टाग्राममा २२ हजार बढीले फलो गरे !
एजेन्सी, स्विटजरल्याण्डको रुटी शहरमा रहेको एउटा यस्तो बिरालो छ जुन हेर्दा डरलाग्दो खालको छ । कतिसम्म भने जेरदान नाम गरेकोको बिरालोको इन्स्टाग्राम प्रोफाइल पनि छ । ६ वर्षको बिरालोलाई २२ हजार बढीले फलो गरेका छन् ।
गरिवको पिडा: मोटरसाइकल दाइजो दिन नसकेपछि विहे रोकियो !
फागुन २८, काठमाडौं । विहेको लागि मण्डप बनिसकेको थियो । एकदिन अघि देखि नै घरमा बाजा बजिरहेको थियो । सबै प्रतिक्षा गर्दै थिए बेहुला अब आउँछ यस्तो समयमा धनुषामा एउटा बिहे रोकेको छ । विहे रोक्नुका कारण केटापक्षले मागेको दाइजो नदिनु नै रहेको छ । धनुषाको नगराईन नगरपालिकाको जटहीका बेचनी सदाकी १९ वर्षीया छोरी पूजा […]
नाभी काट्नको लागि नवजात शिशुलाई रुवाउन खोज्दा शिशु रिसाएपछि…
एजेन्सी, ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो अस्पतालमा एक घटना घटेको छ। उक्त घटना १३ फरवरीमा महिलाले शिशुलाई जन्म दिएपछि नाभी काट्नु अघि चिकित्सकले शिशुलाई रुवाउने कोशिस गरे । शिशु जन्मिने समयमा रोएकी थिइनन् । नाभी काट्नु भन्दाअघि नवजात शिशुलाई रुवाउने कोशिस गरे । नवजात शिशु स्वस्थ्य रहेको र फोक्सोले राम्ररी काम गरेको सुनिश्चित गर्न शिशुलाई रुवाउने […]
चिहान खनेर तयार गरेको ८३ वर्षीया मृतक वृद्ध ब्युँझिएपछि…
एजेन्सी, युक्रेनमा ८३ वर्षीया वृद्ध मृत घोषणा गरिएको १० घण्टापछि पुर्नजीवित भएकी छन् । स्टिरजावका शहरका वाली जीनिया दिमुख रिटायर्ड नर्स हुन् । उनी एक हप्ताअघि कोमामा थिइन् । डाक्टरले जाँच गरेपछि जीनियाले संसार छोडिसकेको बताए । यसपछि परिवारले क्रिया सुरु गरे । स्थानीय अधिकारीहरूले उनको मृत्यु दर्ता समेत गर्न भ्याए र परिवारले एक चिहान […]
पाेर्न फिल्म खेल्न तयार भएकी मिकायला यस कारण हिरासतमा !
एजेन्सी, हलिउडका चर्चित निर्देशक स्टिवन स्पिलवर्गकी छोरी मिकायला जर्जले हालै पोर्न स्टारको रूपमा आफ्नो करिअर सुरु गर्ने घोषणा गरेकी मिकायलालाई घरेलु हिंसाको आरोपमा पुलिसले हिरासतमा लिएको छ । मिकायलाले हालै एडल्ट इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा आफ्नो करिअर बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । मिकायलाले आफूले एडल्ट भिडियो बनाउन शुरू गरेको पनि बताएकी थिइन् । उनका पिता यो विषयलाई […]
हरेक दिन २ सय मिलिलिटर आफ्नै पिसाब पिउने यी व्यक्ति को हुन् ?
एजेन्सी, बेलायतका ३२ वर्षका पुरुषले आफ्नो मूत्र पिउने गर्दछन् । पिसाब पिउनाले लामो समयसम्म जवान भइने तर्क उनको छ । पछिल्लो ४ वर्षदेखि उनले हरेक बिहान आफ्नो अघिल्लो दिन संकलन गरेको बासी पिसाब पिउने गरेका छन् । इंगल्याण्डको ह्याम्पसायरमा बस्ने ह्यारी मतादिन नामका ती युवकका अनुसार दिनहुँ पिसाब पिउनाले उनलाई डिप्रेसनबाट छुटकारा मिलेको छ । […]
शौचालयमा गाेप्य क्यामरा राखेको पाइएपछि…
एजेन्सी, विभिन्न देशहरुमा फरक-फरक घटनाहरु घट्न सोभाविक नै हो। तर भारतमा भने यस्तो भटना भएको छ जुन सुन्दा नै छक्क परिन्छ । भारतको पुनेमा एक क्याफेको शौचालयमा क्यामरा लुकाएर राखिएको भेटिएको छ । एक महिलाले शौचालयमा क्यामरा राखेको पाइएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएपछि पुने तरंगित बनेको छ ।
एजेन्सी, फिलिपिन्समा हरेक वर्ष सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरी गरिने सामूहिक विवाह यसवर्ष पनि सम्पन्न भएको छ । २ सय २० जोडीले कोरोनाभाइरसको त्रासकका कारण मास्क लगाएर विवाह गरेका हुन् । फिलिपिन्सको शहर बाकोलोडमा सम्पन्न भएको यस विवाहको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
एजेन्सी, भारतको बैंगलोरमा एकजना पुरुषले इन्टरनेटमा पोर्न भिडियोहरु हेर्दै गर्दा एक्कासी एउटा भिडियोमा आफ्नै श्रीमतीलाई कुनै अपरिचित पुरुषसँग यौनक्रिडा गरिरहेको देखेपछि उनको पारिवारिक विखण्डन नै हुनपुग्यो । आफ्नै श्रीमतीको पोर्न भिडियो देख्न पुगेका ती ३३ वर्षीय पुरुष उत्तर प्रदेशका हुन् भने उनकी पत्नी कलकत्ताकी हुन् । बिहेपछि उनीहरु दुवैजना बैंगलोरमा बस्दै आएका थिए । बिहेबारीका […]
एजेन्सी, टेरभिल्ले सहरमा गत नोभेम्बर महिनामा स्थानीय एससी टेरभिल्ले र ए एस सोएट्रिक क्लबबीच फुटबल खेलको समय सकिएपश्चात् दुई टिमका खेलाडिहरुबीच झगडा सुरु भएको झगडाका क्रममा खेलाडीहरु गाडी पार्क गर्ने ठाउँमा पुग्दासम्म हानाहानमै उत्रिए । हानाहानमा उत्रिएका दुईजना खेलाडीलाई टेरभिल्ले क्लबका एक खेलाडीले छुट्टाउने प्रयास गरिरहेका थिए । तर झगडा छुट्टाउन आएका उनीमाथि सोएटि्रक क्लबका […]
बीबीसी । छात्राहरूलाई महिनावारी नभएको प्रमाणित गर्न शिक्षिकाहरूको अगाडि भित्रीवस्त्र फुकाल्न बाध्य पारिएको बताएका छन् । महिनावारीलाई लिएर भारतमा देखाइने असहज व्यवहार फेरि समाचारका शीर्षकहरूमा छाएको छ । पश्चिमी राज्य गुजरातस्थित एउटा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूले महिनावारी नभएको प्रमाणित गर्न आफूहरूलाई महिला शिक्षिकाहरूको अगाडि भित्रीवस्त्र फुकाल्न बाध्य पारिएको बताएका छन् । अठसठ्ठीजना छात्रालाई कक्षाकोठाबाट निकालेर शौचालय […]
बीबीसी, मानिसको जीबनमा हरेक खालका घटनाहरु भइरहेको हुन्छ आफ्नो जीबन यापन गर्नको लागि पनि धेरै कठिनाई भएको हुन्छ त्यहि घटना भएको छ आफ्ना साना सन्तानको पेट भर्नका लागि १५० भारतीय रुपैयाँमा कपाल बेचेको दिन प्रेमा सेल्भमको जीवनको सबैभन्दा खराब दिन थियो । तीन सन्तानकी आमा सेल्भमले श्रीमान् पहिल्यै गुमाइसकेकी थिइन् । बढ्दो ऋण र असफल […]
हुन लागेको विवाह कुकुरले गर्दा रोकियो विवाह !
एजेन्सी, विवाह कहिलेकाही नचाहँदा नचाहदै रोकिन्छ कतिको विवाह विभिन्न कारणले गर्दा रोकिन्छ । तर भारतमा भने एक युवतीले कुकुरलाई छोड्न नसक्दा विवाह नै रोकिएको छ । ती युवतीलाई कुकुर धेरै मन पर्ने हुनाले ऊसँग समय बिताउने गरेकी थिइन् । करिश्मा वालिया नाम गरेकी युवतीसँग एक युवाले पारीवारिक सहमतिमा कुराकानी गर्दै आएका थिए । प्रस्ताव राख्ने […]
श्रीमान श्रीमती वीचको बैवाहिक नाता सम्बन्धबाट दायित्व रहित तवरले अलग हुने कानुनी आधारलाई सम्बन्ध विच्छेद भनिन्छ । यसलाई प्राचीन कालमा पारपाचुके, छोडपत्र, भनिन्थ्यो भने परिष्कृत रुपमा सम्बन्ध बिच्छेद भन्ने गरिन्छ । यसलाई अंग्रेजिमा Divorce भनिन्छ भने नेपालमा पनि डिभोर्स भन्ने शब्द नै बढी प्रचलनमा रहेको पाईन्छ भने पारपाचुके पनि भनिन्छ । नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेदको अभ्यास […]
थाहा पाउनुहोस्, यी ५ सपना झुक्किएर पनि अरुलाई सुनाउन हुँदैन
एजेन्सी, हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ । प्राय: मान्छेहरुले निन्द्राबाट बिउझिंदा आफूले देखेका सपनाहरु बिर्सिने गर्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन । तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको संकेत गर्ने गर्छ । प्राय: मान्छेहरु रातको समयमा […]
सात महिने बालक बने ह्वाइटहल सहरको मेयर
एजेन्सी, अमेरिकाको ह्वाइटहल सहरको मेयरमा सात महिना उमेरका बालक विलियम चाल्र्स ‘चार्ली’ म्याकमिलन चयन भएका छन् । उनलाई मानार्थ मेयर बनाइएको हो । यति सानो उमेरमै मेयर बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । उनले हालै मेयर पदको सपथ पनि लिएका छन् । उनको सपथ समारोहमा १५० जना विशिष्ट अतिथि सहभागी थिए । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार […]
बालकलाई अजिंगरले घिसारेर जंगलतिर लागेपछि
एजेन्सी, १५ फुटको स्क्रब अजिंगरले एक चार वर्षका बालकलाई जंगलमा घिसारेर लाने प्रयास गरेको डेलीमेलले बताएको छ । क्लिफोर्ड थोम्पसनलाई गत हप्ता अजिंगरको खतरनाक आक्रमणपछि अस्पताल पुर्‍याइएको छ । घर पछाडिबाट बच्चा चिच्याएको सुनेँपछि हेर्दा एउटा अजिंगरले आफ्नो मुख मेरो छोराको खुट्टामा गाडिरहेको बताए । उनका छोरा क्लिफोर्ड थम्पसनले अजिंगरले घिसारिरहेका बेला रेलिङ समातिरहेका थिए […]